Tommy's Love Stories: Love Trip - Part3(Final)
ဒါ.. ကျွန်တော်တို. လမ်းတစ်ဝက်ကို ရောက်ကြပြီဆိုတဲ့သဘောပေါ့။ ရေမြောင်ကြီးရောက်တော့ နေ့လည်၁၁နာရီထိုးနေပြီ…
“လာကြ ထိုင်ကြ.. အမောဖြေဦး….ညီမလေးတို. ဘယ်အချိန်က တတ်လာကြလဲ” ဆိုင်ရှင်အစ်မက ရင်းရင်းနှီးနှီး ခေါ်ယူရင်းမေးသည်။
အိအိကဖြေသည် “ မနက် ၃နာရီက တတ်လာတာ..”
“မနက် ၃နာရီ..သူများတွေ ဒီအချိန်ဆို တောင်ပေါ်တောင် ရောက်ရော့မယ်.. ကလေးတွေကတော့ဟယ်…” အစ်မကြီးက အားမလိုအားမရပြောသည်။
“ဟိဟိ..ဟုတ်လား၊ ဒါကြောင့် လမ်းမှာ တူတူတတ်တဲ့သူတွေ မတွေ.ဘဲ လူသစ်တွေချည်း တွေ.တွေ.နေတော့ သမီးတို.ကို သူတို.မမှီဘူးထင်နေတာ…” မိစံက ရယ်ကျဲကျဲနှင့် ပြန်ဖြေသည်။
ဒီလိုနဲ့ ရေမြောင်ကြီးမှာ နေ့လည်စာစားရင်း အနားယူကြသည်။ ဇာဇာနဲ့ဖြိုးကိုလဲ သတ်ိရကြသည်။ နေရာတကာ နောက်ကျတတ်တဲ့ ၂ကောင်၊ ခုတော့ တူတူမပျော်ရတော့ဘူးပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ တောင်ပေါ်ရောက်တော့ ညနေ ၄နာရီထိုးပြီ။ အထမ်းသမားတွေကတောင် အစ်မလေးတို. တည်းမယ့်ဟိုတယ်လွဲနေပြီထင်ပြီး ရင်ပြင်တော်ပေါ်သွားရှာတာ ၂ခေါက်ရှိပြီဟု ပြောကြသည်။
မနက်၃နာရီကစတတ်သော အဖွဲ. ညနေ၄နာရီမှ တောင်ပေါ်ရောက်သည်ဆိုတော့ သူတို.လဲ အံ့သြကြပေမပေါ့။ ကျွန်တော်တို.မှာတော့ လမ်းတောင် ကောင်းကောင်းမလျောက်နိုင်တော့။
“ ဟာ….ဇာဇာ… ဖြိုး…”
ဇာဇာနှင့်ဖြိုးက ရေမိုချိုးပြီးလို. ဟိုတယ် ၀ရံတာမှာ ထိုင်တောင်နေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို.ကိုတွေ.တော့ စိတ်ဆိုးပြီး ထထွက်သွားကြသည်။
“နေပါဦးဟ…နင်တို.၂ယောက်က ဘယ်လိုကနေ ဘယ်လို…” အ၀င်းက မေးသည်။
“နင်တို.ကမှ မစောင့်တာ..ငါတို.လဲ ကားလက်မှတ်အသစ်ဝယ်ပြီး နောက်ကားနဲ့ လိုက်လာတာပေါ့၊ ခုလဲ တောင်ပေါ်ကို ကားနဲ့တတ်ပြီး ကြိုရောက်နေတာ။”
“သြော်..အဲလိုလား.. ငါတို.လဲ ကားဆရာကို စောင့်ခိုင်းပါတယ်…ဒါပေမယ့် သူက ၅မိနစ်ထက်ပိုမစောင့်ဘဲ မောင်းထွက်သွားလို.၊ ငလင်းတောင် နင့်အိမ်ကို ဖုန်းငှားပြီးခေါ်သေးတယ်.. နင်တို.ထွက်သွားပြီတဲ့..တော်သေးတာပေါ့ဟာ.. ငလင်းအမေ ဟိုတယ် Booking လုပ်ထားပေးလို.သာပေါ့.. မဟုတ်ရင် ဒီလူအုပ်နဲ့ ငါတို.တွေ တွေ.မှာတောင်မဟုတ်ဘူး..” အ၀င်းက ရှင်းပြသည်။
“မတွေ.လို.ရမလား..ငါတို.က ဂေါပကရုံးသွားပြီး နင်တို.နာမည်တန်းစီရွတ်ခိုင်းမှာပေါ့..” ဖြိုးက ပြန်ပြောသည်။
“ကဲ..ကဲ … စကားလေးတွေခဏရပ်မယ်.. ငါအရမ်းပင်ပန်းနေပြီ.. အခန်းသွားယူကြမယ်.. “ ကျွန်တော် စကားစကိုဖြတ်ရင် Reception ကိုသွားသည်။ အကုန်လုံးလဲ နောက်မှလိုက်လာကြသည်။
၂ယောက်ခန်းတွေချည်းဖြစ်သောကြောင့် ယောကျာ်းလေး၂ယောက်တစ်ခန်း၊ မိန်းကလေး၆ယောက်က ၂ယောက်တစ်ခန်းစီ။
“ငါတို. အခန်း ၂၀၆ ရတယ်.. ငါတို.အခန်းက Balcony ပါတယ်တဲ့… View ပိုလှတယ်.. မြန်မြန်လာ ဟိုကောင်တွေလာလုလိမ့်မယ်..” ပုံ.ပုံ.လက်ကိုဆွဲရင်း အခန်းဆီသို.ပြေးသည်။
ဟိုကောင်တွေ ခဏကြောင်ပြီး ဆူညံပွက်လောရိုက်ကာ ကျန်ခဲ့ပြီ။ ဟုတ်သည်လေ… Balcony က ဒီတစ်ခန်းဘဲပါတာ..း)
အခန်းထဲရောက်တော့ မောလဲမောသလို ရင်လဲခုန်နေသည်။ ကုတင်၂လုံးက ဘေးချင်းယှဉ်လျက်။ ကျွန်တော့်ရင်ခုန်သံတွေ တော်တော်မြန်နေပြီ။ ကျွန်တော် ပုံမှန်မဟုတ်တာ ပုံ.ပုံ.လဲ သိနေသလိုပင်။
တိတ်ဆိတ်မှုကို သူမက စတင်ဖြိုခွဲလိုက်သည်..
“ရေချိုးခန်းဘက်ခြမ်းယူမယ်.. ငါက ပြတင်းပေါက်နားမအိပ်ရဲဘူး..”
ကျွန်တော့်စကားဆုံးတော့ သူမရီသည်။ အိုး…သူမသွားလေးတွေက စီစီရီရီနှင့် လှလွန်းသည်။
“နင်ကလဲ နေတော့ ကောင်လေးပုံနဲ့ ကြောက်တတ်လိုက်တာ..အဲ..” သူမ အရီတစ်ဝက်နှင့်ပြောရင်း၊ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းတွေကို မြင်သွားသည်။ သူမစကားပြောရပ်သွားပြီး ကျွန်တော်တို. ၂ယောက် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ငေးကြည့်နေမိသည်။
“ဒုန်း..ဒုန်း..ဒုန်း..ရေမြန်မြန်ချိုးကြဟေ့… နောက် နာရီဝက်နေရင် ရင်ပြင်တော်ပေါ်တတ်မယ်..” အိအိအသံက တံခါးဝဆီမှ လျံထွက်လာသည်။
“ဒုန်း..ဒုန်း..ဟဲ့..ကြားကြလား…ငလင်းနဲ့ ပုံ.ပုံ.” တ့ခါးကိုထုရင်း ဆက်အော်သည်။
“အေးပါဟ.. ကြားပါတယ်…” ကျွန်တော်ပြန်အော်မှ
“ကြားရင်ပြီးရော… “ ဆိုကာ အိအိနောက်တစ်ခန်း ဆက်ထွက်သွားသည်။
ကျွန်တော်တို. ၂ယောက်ခေါင်းတွေငုံ.ပြီး ရှက်နေကြသည်။ ပြီးမှ ကျွန်တော်ကဘဲစပြီး…
“ပုံ.ရေအရင်ချိုးလိုက်လေ.. ကျွန်တော်ပြီးမှ ချိုးမယ်..”
“အင်းး…ပြီးရော..ပုံ.အရင်ချိုးလိုက်တော့မယ်…” ဆိုကာ ရေချိုးခန်းထဲ ပြေးဝင်သွားသည်။
ကျွန်တော်လဲ အိပ်ယာပေါ်လှဲချရင်း… ၀ှူး…ခုန်နေသော ရင်ဘတ်ကိုဖိရင်း လေပူတွေကို မှုတ်ထုတ်မိသည်။
ရေချိုးသံထဲက ရေကျသံကလဲ ကျွန်တော့်စိတ်ကိုအတောမသတ် လှုပ်ရှားနေစေပြန်ရော..
“ ငလင်း စိတ်ထိန်း စိတ်ထိန်း… အခုရောက်နေတာ ဘုရားရောက်နေတာ..” ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်သတိပေးနေရသည်။
ရင်ပြင်ပေါ်တတ်ဖို. မုခ်ဦအ၀ရောက်တော့ ကျွန်တော်ပြသနာတတ်သည်။ ထမီဝတ်ရမည်တဲ့။
ဟာ…မ၀တ်ချင်ပါဘူး။ လုံခြုံရေးကလဲ ထမီမ၀တ်လျှင်လုံးဝပေးမတတ်တဲ့။
ကျွန်တော်တို.၂ယောက် အခြေအတင်ဖြစ်နေကြသည်။ ကျွန်တော် ရင်ပြင်တော်ပေါ်မတတ်ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး..
ထိုအချိန်တွင် ပုံ.က ကျွန်တော့်လက်မောင်းကို ကိုင်ပြီး၊
”၀တ်လိုက်ပါ လင်းရယ်.. နင်မပါတော့ ငါတို.တွေဘယ်ပျော်မှာလဲ..”
သူမစကားတစ်ခွန်းနဲ့တင် ကျွန်တော် စိတ်တွေကို လျော့ချလိုက်သည်။ လုံခြုံရေးကိုတော့ မကြည်ကြည့် ကြည့်ရင်း အိအိပေးတော့ ထမီကိုဆွဲပြီး ခေါင်းကနေစွပ်ချသည်။
ကျွန်တော်မကြားချင်ယောင်ဆောင်ပြီး၊ လှေကားထစ်တွေ ပြေးတတ်လာခဲ့သည်။
ဘယ်သူ.ကိုမှလဲ စကားမပြောချင်၊ အထူးသဖြင့် အခုလိုပုံစံနဲ့ ပုံ.ပုံ.ကို မတွေ.ချင်… ကျွန်တော် ရှက်နေမိသည်။ တခုခုကိုလဲ စိတ်နာနေသည်။ ဘာရယ်လဲ သေချာမသိ..
ရင်ပြင်တော်ပေါ်ရောက်တော့ ဘုရားရှခိုး ဆီမီးကပ်ပြီး၊ စိတ်တွေ နဲနဲကြည်လင်စပြုလာသည်။ ကျိုက်ထီးရိုးစေတီရဲ့ ရွှေရောင်ဝင်းနေသော ကျောက်လုံးတော်က စိတ်ထဲက နောက်ကျိမှုတွေကို သက်သာစေသည်။ ယောက်ျားလေးတွေ ဘုရားဆီသွားပြီး ရွှေသင်္ကန်းကပ်နေချိန် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားငယ်မိသည်။
“လင်း… ဆီမီးကူထွန်းပေးပါဦး…” ပုံ.ပုံ.က လှမ်းအကူအညီတောင်းသည်။
ဟုတ်တာပေါ့ ဒီနေ့က နှစ်သစ်ကူးညဆိုတော့ ရင်ပြင်တော်ပေါ်မှာ ဆီမီးထွန်းသူတွေ ပြည့်လျံနေသည်။ ဒီတော့ ဆီမီးခွက်နေရာတွေကလဲ အပြည့်။ ကျန်နေသောနေရာက ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ၊ ထိုနေရာကို သူမရဲ့ ရှည်လျားသောဆံပင်တွေနဲ့ ဘယ်လိုမှ ကုန်းပြီးထွန်းလို.မရ၊ ထို.အပြင် မီးတွေကလဲ ပူလွန်းသည်… ကျွန်တော်ခပ်မြန်မြန်သွာြး့ပီး.. သူမဖယောင်းတိုင်ထုပ်ကို လှမ်းယူလိုက်သည်။
သူမအတွက် ဖယောင်းတိုင်လေးတွေကို မီးအပူခံကာ သေသေချာချာ လှလှပပစီရီပြီးထွန်းပေးသည်။
ဆီမီးထွန်းပေးပြီးတော့ ရင်ထဲမှာပျော်နေသည်။ ၂ယောက်တူတူဘုရားကို လက်အုပ်ချီကန်တော့ရင်း ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေ ပြုံးနေတာကို သတိထားမိသည်။ ဘာရယ်မဟုတ်…သာမန်ကောင်မလေးတစ်ယောက် မလုပ်နိုင်တာကို ကျွန်တော်လုပ်နုိုင်ခဲ့လို.။ သူမကလဲ ကျွန်တော်ထွန်းပေးတဲ့ ဆီမီးလေးကို ပြုံးပြီးကြည့်နေသည်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို.၂ယောက် မျက်ဝန်းတွေဆုံမိကြပြန်သည်။
ဒီတစ်ခါတော့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် နားလည်မှုပြည့်သော အကြည့်တွေနှင့်။
ထိုအချိန်တွင်တော့ ရင်ပြင်တော်အောက်ဘက် စားသောက်ဆိုင်တန်းမှ မီးရှူးမီးပန်းအချို.မြင်လိုက်ရသည်။
လူတွေအားလုံးနှင့်အတူ သူမလက်ကိုဆုပ်ကိုင်ရင်း ပျော်ရွှင်စွာ ကြွေးကြော်လိုက်သည်။
Posted by Tommy Girl at 6:36 AM